Komiti yeparamende inoona nezvebhajeti nhasi yaita musangano nemasangano anomirira vemabhizimisi kuti vazeye mamiriro akaita zvinhu panyaya yemari yekunze uye kuti vari kukwanisa kuita basa zvakanaka here kubva mutungamiri wenyika vaemmerson mnangagwa negurukota rezvemari Muzvinafundo Mthuli Ncube vadzika zvirongwa zvechimbi chimbi kuyedza kugadzirisa nyaya dzezvehupfumi.
Kunyangwe VaMnangagwa vari kuti matanho aya akanangana nekumisa vari kukanganisa hupfumi, vemabhisimi vakawanda vanoti zvave kutopa kuti zvinhu zvidhure nekushaikwa muzvitoro.
Masangano apinda mumusangano wanhasi anosanganisira Zimbabwe National Chamber of Commerce (ZNCC) neConferderation of Zimbabwe Industries (CZI) asi hatina kukwaanisa kunzwa kuti wafamba sei sezvo uchiri kuenderera mberi.
Asinya nzvi munyaya dzezvehupfumi vachishanda vakazvimirira, uye vakambove nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvebhajeti, VaSimon Mahove, vati paramende haifiniri kutambisa nguva ichiita misangano sezvo zvinodiwa kugadziriswa zvichizikanwa.
Mitengo yenzvinhu iri kukwira zvakanyanya zvekuti veruzhinjii vanoti raramo yavo yave parumananzombe.
Nemusi weSvondo kambani yehurumende yeZESA yakakwidza mari yemutero wemagetsi uukuwo mitengo yezvimwe zvinhu zvinoshandiswa mazuva aese zvakakaita seshuga mafuta ekubikisa yakawedzerwawo.
Mumwe mugari wemuHarare, Amai Charity Rugare vaudza Studio 7 kuti hupenyu hwavaomera sezvo zvinhu zviri kukwira zuva nezuva.
Izvi zvatsinhirwa nemumwe mugari wekuChitungwiza uyo asina kuda kudomwa nezita.
Vachitaura vari kuChimanimani mukuru wesangano rePlatform for Youth and Community Development, VaClaris Madhuku, vaudza Studio 7 kuti zvinhu zviri kukwirawo kunzvimbo iyi uye vazhinji vave kudzokera kutsika yakare yekunotenga zvinhu kuMozambique neSouth Africa.
Vanoongorora magarire akanaka evanhu, VaItai Ruben Mbofana , vaudza Studio 7 kuti matanho avaMnangagwa ari kutowedzera kutambura kwevanhu.
Nemusi weMugovera gurukota rezvemari, VaMthuli Ncube vakazivisa kuti hurumende yave kubvumidza vane mari yavo yekunze kana kuti maFree Funds kuti vanotenga chikafu kunze kwenyika.
VaHove vanoti vanhu vashoma chose munyika vane mari yekunze vachiti zvakaitwa naVaMthuli Ncube ndiko kubvuma kuti muno hamuna zvinhu zviri kugadzirwa.
Vakambotungamira ZNCC Doctor Callisto Jokonya vanoti matanho aVaMnangagwa anorwadza asi akakodzera.
Kunyange hazvo hurumende ichizvirova dundundu ichiti zvikamu makamu manomwe kubva muzana zvezvinhu zvese zviri muzvitoro zvemuno, CZI yakavisia svondo rapfuura kuti zvikamu makumi mashanu nezvitanhatu kubva muzana nezvemaindasitiri ndizvo chete zviri kushanda nekuda kwematambudziko akaita sekushaya mari yekunze.
Mukuru weReserve Bank of Zimbabwe, Doctor John Mangudya vakaudza nhepfenyuro yeZBC svondo kuti matanho aVaMnangagwa achavepo kwenguva pfupi sezvo akanangana nekudzikamisa hupfumi.Vakaudza zvakare bepanhau reSundayMail kuti matanhanho aya anogona kuongororwa svondo rino.